Cilmi baaris ay sameeyeen TRF | Abaalmarinta Abaalmarinta: Jacaylka, Galmada iyo Internetka
Bogga ugu weyn Nagu saabsan Cilmi baarista TRF
Kooxda The Reward Foundation waxay ku lug leedahay cilmi-baarista lala yeesho wada-hawlgalayaasha UK iyo USA. Waxaan si dhow ula shaqeynaa khabiirada dareemayaasha ee jaamacadaha ugu sareeya iyo khabiirada takhasuska leh ee goobaha caafimaadka. Waa kuwan qaar ka mid ah cilmi-baaris asaasi ah oo aan daabacnay Dhammaantoodba waxaa ku jira joornaalkii dib loo eegay.
Mid ka mid ah waraaqahayaga Yokohama ee hadda lagu daabacay marin-u-furan, joornaal dib loo eegay. Warqaddu waa Ku-habboonaynta "Manifesto-ka Shabakadda Cilmi-baarista Yurub ee Adeegsiga Dhibaatada leh ee internetka" iyadoo la raacayo Baahiyaha Kala Duwan ee Bulshooyinka Xirfadeed iyo Macaamiil ee ay Saameeyeen Isticmaalka Dhibaatooyinka Filimka. Waxay dejineysaa talooyinka TRF ee cilmi baarista loo baahan yahay tobanka sano ee soo socota. Si qoto dheer story warqaddu waa halkaan.
Bishii Juun 2019 TRF waxaa lagu soo bandhigay shirkii 6aad ee Caalamiga ah ee Yokohama, Japan. Waxaan gaynay laba warqado wada jir ah qaybta Dabeecadaha cakiran iyo dabeecadaha kale ee xad-dhaafka ah. Maryan Sharpe ayaa ka hadashay Caqabadaha baraya ardayda iskuulada ee ku saabsan cilmi baarista ku-takooridda akhlaaqda. Darryl Mead ayaa bixiyay Isku-dubbaridinta Manifesto ee shabakad cilmi-baaris oo Yurub ah oo loo adeegsado Isticmaalka Dhibaatada Internetka iyadoo la adeegsanayo baahiyo kala duwan ee xirfadaha iyo adeegatada macaamilka ee ay saameeyeen isticmaalka dhibaatada ee fara-xumeynta.
Daabacaadda ugu dambeysay waa Pornography iyo Warshadaha Cilmi-Baarista Galmada ee Shirka Caalamiga ee 5th ee Ku-Xeeladaha Habdhaqanka. Shirkan waxaa lagu qabtey magaalada Cologne ee Jarmalka bishii April 2018. Warqadda ayaa lagu daabacay Macaamilka Galmoodka iyo Isku Xidhnaanta online on 18 March 2019. Waxaan ku siin karnaa isku xirka warka la daabacay codsi. Qoraal daabacan oo qoraal ah ayaa laga heli karaa Cilmi baaris.
Warbixintii shirka ka soo baxday Cologne ayaa ku qeexday bandhiggayaga koowaad ee arimahan. Waxay ahayd Isgaadhsiinta sayniska mukhaadaraadka internetka ee dhagaystayaasha ballaaran.
Warqadan ayaa la dhisay Pornography iyo Warshadaha Cilmi-Baarista Galmada ee Shirka Caalamiga ee 4th ee Ku-Xeeladaha Habdhaqanka. Waxaa lagu daabacay Macaamilka Galmoodka iyo Isku Xidhnaanta khadka tooska ah 13 Sebtember 2017. Waxay u muuqatay daabacaadda Cadadka 24, Lambarka 3, 2017. Faahfaahin dheeraad ah oo ay ku jiraan dib u eegista iyo waxa la taaban karo ayaa laga heli karaa TRF Blog. Haddii aad rabto nuqul ka mid ah maqaalkan, fadlan noogu soo qor Hel in Touch hoose ee boggan.
Nidaamka Diyaargarowga Internetka iyo Dembiyada Galmada
Mary Sharpe, Madaxa Fulinta ee Hay'adda Abaalmarinta Abaalmarinta Reward Foundation, ayaa wada-baaraandeg cutub ah la yeelatay Steve Davies oo ka tirsan Lucy Faithfull Foundation. Waxaa loo yaqaan "Qaabka socodka Internetka iyo Dembiga Galmada". Cutubka ayaa ka muuqday La shaqeynta Shakhsiyaadka Dembiyada Galmoodka sameeyay: Tilmaamaha Dhakhaatiirta. Tan waxaa daabacay Routledge bishii Febraayo 2017 waana la iibsan karaa halkan. Waxa kale oo aad ka akhrisan kartaa a story ku saabsan.
Dr Darryl Mead, Guddoomiyaha Hay'adda Reward Foundation ayaa daabacay warqad ku saabsan "Khataraha Dhallinyarada ay la kulmaan Macaamiisha Porno ”. Tani waxaa lagu daabacay Addicta: Jariiradda Turkiga ee Xayiraadda dhammaadka 2016 iyo qoraalka oo dhan waa la heli karaa bilaash.
Bishii Ogosto 2016, Gary Wilson, oo ah sarkaalka cilmi-baarista sharafeedka ee The Reward Foundation, ayaa wada-qoray warqad ay la socdaan 7 dhakhaatiir Navy US ah iyo dhakhaatiir cilminafsiyeed oo lagu daabacay joornaalka "Sayniska Dhaqanka": Miyuu Pornography Internet ka keenayaa Dhibaatooyinka Galmada? Dib-u-eegis Warbixin Caafimaad"Waxaa si xor ah loo heli karaa Sayniska Dhaqanka bogga. Tani waa ugu caansan warqad waligeed la daabacay ee Sayniska Habdhaqanka.
Gary Wilson wuxuu kaloo qoray warqad muhiim ah oo dejineysa jihada loogu talagalay cilmi baarista mustaqbalka ee waxyeelada filimada. Waa “Ka tirtir filimada qaawan ee Internetka loo adeegsado si loo muujiyo saameynta ay leedahay” waxaana lagu daabacay Addicta, Somali Journal of Addictions, 2016. Xidhiidhku wuxuu si bilaash ah u helayaa daraasadda oo dhan.